Lahatsary Fanadihadiana Fohy Iray Mizaha Ny Kolontsaina Kamiao Kanto Mamirapiratra ao Japana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Febroary 2017 7:44 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, bahasa Indonesia, 日本語, Español, English
kamiao ‘Dekotora’ ao Japana. Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr Kanon Serizawa. Lisansa ny sary: CC BY-NC-ND 2.0.
Mamirapiratra-manaitaitra izy ireo, mandresy lahatra ny maso ary jerena toa fialamboly izay mitentina vola be: izay rehetra efa tany Japana dia mety efa nahita ny kolontsaina ”taokanton'ny kamiao” Japoney. Fantatra amin'ny anarana dekotora (デコトラ, fanafohezana ny ”kamiaon'ny ravaka”), voaravaka jiro mitselatselatra sy loko peta-drindrina ary chrome be dia be ireo taokanton'ny kamiao Japoney.
Vao namoaka lahatsary fanadihadihana fohy kely mikasika ny dekotora ny Anatin'ny Kolontsaina Japoney DIY (ianao ihany manao azy) Kamiao Mamitaka ny Great Big Story,. Manasongadina ny dikanteny Anglisy, ary sarinà kamiao manjelanjelatra maro ilay lahatsary.
Toy ny kolontsaina rehetra hafa, misy vondrom-piarahamonina dekotora mihetsiketsika ihany koa ao amin'ny Instagram. Ireto misy sary vitsivitsina ”kamiaon'ny ravaka” any Japana.
Raha toa ka anjakan'ireo mpankafy hard-core ny dekotora, tsy mahagaga ny mahita kamiao fitaterana, fanariana fako sy ireo fiara hafa voahaingo ravaka manaitra eo amin'ny arabe sy lalambe roa zotran'i Japana.
Toy izao ny bikan'ny kamiao fanariana fako voaravaka miampita ny lalambe roa zotra Tohoku:
Tsy ny dekotora rehetra no manaitra, fa samy maneho ny toetra tsy manam-paharoan'ny tompony daholo izy ireo:
#SaryBikan-drirana Tahaka ny Impala Chevy izany avy eo aloha! #kamiaofiasana #dekotora
Tamin'ny voalohany, tsy dia hoe hafahafa ny mahita kamiao fitaterana voaravaka sary an-drindrina. Mitondra sary an-drindrina triptych (eo amin'ny lafiny sy eo amin'ny varavaran'ny fitoeran'entana ao aoriana) izay mampiseho ny sehatra iray avy tamin'ilay sarimihetsika tamin'ny 2001 “Kai Doh Maru” (怪童丸), ity kamiao ity:
Tsy dia misy kamiao fitaterana misy sary an-drindrina toy ny taloha intsony, ah? #MitsubishiFuso #fuso #FusoMpiady #dekotora #KaiDohMaru
Ny tompon'ity kamiao ity dia mitsidika toeram-pivavahana any Inuyama, avaratr'i Nagoya. Nasiana kararaka vy vita amin'ny chrome sy tsivalamby izany, ary koa sary an-drindrina mampiseho an'i Anpan Man, mahery fo malaza avy aminà sariitatra:
#lanitratalakymasoandro Mihinana #AnpanMan kely. #milazany vavakay #dekotora #misaotraamin'nyfijerenanysariko ( ´͈ ᗨ `͈ )◞♡⃛
Mpitondra kamiao maro no saika mipetraka ao anatin'ny fiarany. Ity misy sary mitodika any amin'ny aro-rivotra, ambanina lambambaravarana nasiana lefitra manavaka kamiao maro miasa ao Japana:
Manao ahoana! Tena avy orana be androany an! #miandrynyfampakarana #androhafa #falymahafantatra anao #familianaazoantoka #manasanykamiaokoahorehefavitanyasa #laolina #dekotora
Afaka mizaha ireo taokanton'ny kamiao dekotora an'i Japana ao amin'ny Instagram ianao amin'ny fampiasana ny tenifototra #デコトラ